2018 ဖြင့် ဇာတ်ကား100 ကား
၂၁ပက်လက်လိုချင်တဲ့ ဘရိုများ Beirut နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ အရှေ့အလည်ပိုင်းကအရှုပ်အထွေးတွေကြားထဲမှာ ဇာတ်အိမ်တည်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ဇာတ်လမ်းအေးအေးလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားမို့ အဲဒီ၂၁ပက်လက် ကွီးတွေကြိုက်တတ်တဲ့ကားမျိုးပါလို့ 😛 ၂၀၁၈ ကမှထွက်ထားတဲ့ Espionge thriller ဇာတ်ကားလေးပါ။ Negotiator လို့ UK မှာတော့နာမည်ကြီးပါတယ်တဲ့။ IMDB Rating 6.5 နဲ့ Rotten Tomatoes 77% ပဲရရှိထားတာ ရသင့်တာထက်နည်းတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးက အရှေ့အလည်ပိုင်းဒေသ Lebanon က Beirut မြို့မှာ နေတဲ့သံတမာန်ရေးရာမှာဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ Mason Skiles တစ်ယောက် နာမည်ကြီးရာဇဝတ်ကောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ညီကိုမွေးစားထားမိပါတယ်။ အဲဒီကလေးကို သူ့အစ်ကိုပြန်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သူ့ချစ်ဇနီးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဘဝကိုအမိမြေပြန်ပြီး အဓိပ္ပါယ်မရှိဖြတ်သန်းနေရင်း Beirut မှာအရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Cal Riley တစ်ယောက်ပြန်ပေးဆွဲခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှိုနှိုင်းပေးဖို့ ပြန်လာရတဲ့အချိန်မှာတော့… ဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေသူငယ်ချင်းကို အန္တရယ်ကင်းကင်းကယ်ထုတ်နိုင်မှာလား သူကိုယ်တိုင်ရောအန္တရယ်ကင်းမှာလား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကရောယုံကြည်ရရဲ့လား အရှုပ်အထွေးတွေလှည့်ကွက်တွေနဲ့တင်ဆက်ထားတာကို ဇာတ်ကားမှာပဲကြည့်ရအောင်ဗျာ
မင်းသားကြီး Nicolas Cage ရဲ့ Action, Mystery, Thriller ဇာတ်ကားသစ်လေးပါ။ သေပြီးသူတွေကို ပြန်အသက်သွင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းဆိုတာမျိုးကို ရှိသင့်တယ်ထင်ပါသလား။ ရှိရင်လည်း အဲဒါက ကောင်းမလား ဆိုးမလား။ အလုပ်ရောဖြစ်ပါမလား။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင် Julie က သူကိုယ်တိုင် သေလုမြောပါးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ တခြားတစ်ဖက်ကိုကူးသွားပြီးတော့ ဝိညာဉ်တွေကို ပြန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့သမီးဖြစ်သူ Billie တစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး ဝိညာဉ်ထွက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာ မိသားစုမရှိ ဦးတည်ချက်မရှိ ဘဝသေနေတဲ့ Truck ကားမောင်းသမား Joe ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ ပြန်ခေါ်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့သမီးက သူ့နဲ့စိမ်းနေသလိုဖြစ်ပြီးတော့ အခုမှမြင်ဖူးတဲ့ Joe ကိုတော့ ရင်းနှီးနေသလိုဖြစ်နေတာကနေ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြပါတော့။ ကြမ်းခန်းရမ်းခန်းတွေပါတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ကြည့်ဖို့တော့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။
၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက် အလန်းစား တမီလ်ကားလေး တစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ရှုပ်တွေ အရမ်းခေတ်စားတဲ့ ဘောလီးဝု၊ သောလီးဝု ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ နိုင်ငံရေး လုပ်စားကွက်တွေကို ဟော်ရာ(horror) ထည့်ရိုက်ထားတဲ့၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဟော်ရာပေါင်းစပ်ရိုက်ကူးထားတဲ့၊ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ… အခုခေတ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကြားထဲမှာ အရင်ခေတ်က မိဘုရား တစ်ပါးက ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ပါဝင်လာသလဲ? ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့ အင်အားသုံးခုဖြစ်တဲ့ ငွေရယ်၊ လူထုထောက်ခံမှုရယ်၊ ဦးဏှောက်ရယ်ကို ဘယ်လိုမျိုး ကစားသွားသလဲ? စတာတွေကို ကြည့်ရှုရမဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါ ရိုက်ချက်ကောင်းကောင်း၊ ဇာတ်လမ်းကောင်းကောင်း ကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး India တောင်ပိုင်းဇာတ်ကားတွေက ဇာတ်လမ်းပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ရင်တော့ ဆရာကြီးတွေပါ သူတို့ရဲ့ကားတိုင်းလိုလို double twist တွေနဲ့လာပါတယ် ဒါပေမဲ့ မင်းသားတွေက over action တွေကြောင့် ကြည့်ရတာနည်နည်း ဖီလင်အောက်သွားတတ်တာပါ ဒါကြောင့် ဒီဇာတ်ကားကိုလည်း အဲ့လိုဖီလင်အောင်မလားလို့ စိုးတထင့်ထင့်နဲ့ ဘာဟူဘာလီမင်းသမီးခေါင်းဆောင်ပါဝင်လို့ သွားကြည့်မိတာပါ မန်မာပရိသတ်တွေအကြိုက် နှစ်ဘဝကလဲ့စားမင်းသမီးပေါ့၊ ဒါရိုက်တာက ဒီဇာတ်လမ်းကို ဒီမင်းသမီးနဲ့ရိုက်ချင်လို့ ၄နှစ်စောင့်လိုက်ရပါတယ်၊ မင်းသမီးကရိုက်ရက်မအားလို့ပါတဲ့၊ ထူးထူးခြားခြား တောင်ပိုင်းဇာတ်ကားတွေထဲမှာမှ သီချင်းက တစ်ပုဒ်ထဲပဲပါပါတယ်၊ ဇာတ်လမ်းကထွေလာကြည့်ပြီးတော့ သရဲကားလို့ထင်နေမိတာ၊ ဒါပေမဲ့ သရဲကားမဟုတ်ပါဘူး၊ ပြောချင်တာက သရဲတော့ခြောက်ပါတယ်၊ အကြမ်းကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ အနုခြောက်ခြောက်တာပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်းပိုင်းမှာအရမ်းမိုက်သွားပြီး Plot Twist တွေကအလန်းပြီး ခန့်မှန်းရခက်တာမို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ်ထင်ထားတာဖြစ်မလာတာက လဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့သူကို ဆွဲဆောင်တဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်ပါပဲ ကဲဗျာ ဇာတ်လမ်းပိုင်းလေးကို သွားလိုက်ရအောင် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ တောထဲမှာရှိတဲ့ သရဲအရမ်းခြောက်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ဘာဂါမသီ ဆိုတဲ့ အိမ်ကြီးရှိပါတယ်၊ ချန်ချလာ ဆိုတဲ့ကောင်မလေးက အာဏာရဝန်ကြီးရဲ့ ညာလက်ရုံး၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ယောကျာ်းကိုသတ်တဲ့အမှုနဲ့ထောင်ထဲရောက်သွားပါတယ်၊ အဲ့အချိန်မှာပဲ အနီးအနားရွာတွေမှာရှိတဲ့ ရှေးဟောင်းစာရင်းဝင် တန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကခဏခဏပျာက်ဆုံးနေပါတယ် ထောက်လှမ်းရေးတွေ သံသယရှိတာက အာဏာရဝန်ကြီးက ဒီပျောက်ဆုံးမှုက ပါဝင်နေတယ်လို့ထင်နေတာပါ ဒီတော့ ထောက်လှမ်းရေးက ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ဝန်ကြီးရဲ့ ညာလက်ရုံး ချန်ချလာကို ထောင်ထဲကထုတ်ပြီး ဝန်ကြီးမသိအောင် တောထဲက ဘာဂါမသီ အိမ်ကြီးမှာ စစ်ဆေးလုပ်ဖို့ ချန်ချလာကို အဲ့ဒီ့အိမ်ကြီးမှာထားလိုက်ပါတယ်၊ သရဲအလွန်ခြောက်တယ်လို့ အိမ်ကြီးထဲရောက်သွားတဲ့ ချန်ချလာတစ်ယောက် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေကြုံရမလည်း…. ဝန်ကြီးကကော လက်ရှိအမှုမှာ တကယ်ပဲ ပါဝင်ပတ်သတ်နေလား….. ချန်ချလာကကော သူ့ယောကျာ်းကို ဘာကြောင့်သတ်ပစ်လိုက်ရတာလည်း…… တစ်ခြားနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုခြောက်လန့်မှုတွေက ရှိနေသေးလည်းဆိုတာ….. ကိုတော့ ပရိတ်သတ်ကြီးကဆက်လက်ကြည့်ကြရမှာပါ ဒီဇာတ်ကားမှာ အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုက အသံပါပဲ၊ ဒီဇာတ်ကားမှာ အသံဖန်တီးမှုတွေက အရမ်းကောင်းပါတယ်၊နောက်ပြီး တော့ ဘာဂါမသီဆိုတဲ့အိမ်ကြီး၊ ဇာတ်ကားပြီးတော့ ရိုက်ကွင်းပြတော့ လုံးဝအံသြသွားမိပါတယ်၊ နောက်ကွယ်ကဘယ်လိုပြင်ဆင်ရလည်းဆိုတာကိုလည်း ပညာရခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း ဟောလိဝု သောလိဝုကားတွေက နော်ကပိုင်းမှာအောင်မြင်လာတာပါ မင်းသမီးကတော့ရင်းနှီးထားပြီးသားဆိုတော့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းပြီးသားဆိုတာကိုပြောစရာမလိုပါဘူး၊ နည်းနည်းဝတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ချစ်စရာလေးပါ တစ်ခြား တောင်အိန္ဒိယကားတွေလို အိုဗာတွေမပါတော့ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပါတယ် ဖီလင် မအောက်ပါဘူး ကလေးဘဝတုန်းက ဒီဇာတ်လမ်းနဲ့ဆင်တဲ့ကာတွန်းတစ်ပုဒ်ဖတ်ဖူးတယ်၊ ဒိရဲဂျာကာတွန်းပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်သိမ်းမတူပါဘူး ၊ဒီကားထဲမှာကြိုက်တာက ဇာတ်သိမ်းခန်းပါပဲ ၊တကယ်ကြမ်းတာပါ၊ ရုံမှာကြည့်ရင်တော့ အသံစနစ်ကောင်းတော့ရှယ်ပါ ၊ အခွေမှာကြည့်ရင်လဲ အဆင်ပြေမှာပါ ပြီးတော့ ဒီကားက သရဲကားကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ အကြိုက်တွေ့မှာလို့ပြောလိုက်ပါရစေဗျ
မကြာခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ မင်းသားကြီး Donnie Yang ရဲ့ဇာတ်ကားသစ် Big Brother နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်.. ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ Donnie Yang က ကျောင်းဆရာ အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ဇာတ်လမ်းသဘောက တဲကျင့်အလယ်တန်းကျောင်းဟာ အောင်ချက်ကျရံှူးနေတဲ့ကျောင်းဖြစ်သလို ထောက်ပံ့ကြေးအနည်းငယ်သာရခဲ့တယ် အဲ့အချိန် ကျောင်းဆရာအဖြစ် Donnie Yang က ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲ ဆိုးသွမ်းပြီးစာမလုပ်တဲ့ကလေးတွေအခန်းကို ကိုင်တွယ်ရတယ် ကလေးတွေမှာလည်း သူတို့အခက်အခဲနဲ့သူတို့ရှိကြတာကို ဆရာက သိသွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုကိုင်ကွယ်ဖြေရှင်းမလဲ ဆရာကလည်း အရင်ကတည်းက အဲ့ကျောင်းမှာတက်ခဲ့ပြီး ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့လဲ ကျောင်းကြီးကလည်း ထောက်ပံ့ကြေးမရတော့ရင် ပိတ်ခံရတော့မဲ့အချိန် ဘယ်လိုကြိုးစားကြမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားမှာပဲ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Donnie Yang ရဲ့ ဖိုက်တင်အခန်းတွေလည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်
မင်းသားကြီးဗန်ဒိန်းနဲ့ ရုရှားအာနိုးလို့လူသိများကြတဲ့ Dolph Lundgrenတို့ပါဝင်ထားတဲ့အက်ရှင်ကားသစ်လေးပါ ဗန်ဒိန်းက စီအိုင်အေအေးဂျင့်စကော့ဝီလ်လာအဖြစ်၊ ရုရှားအာနိုးက ဂျာမန်သူလျိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် စကော့ဝီလ်လာ စီအိုင်အေကအထူးလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့အေးဂျင့်အရေးကြီးဟာ့ဒ်ဒရိုက်ဖ်တစ်ခုအတွက် လျို့ဝှက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရသူ ဒါပေမယ့် သစ္စာဖောက်လို့အထင်မြင်မှားခံရပြီး ရေငုပ်သဘောၤထဲမှာ အကျဉ်းချခံလိုက်ရတယ် အကျဉ်းထောင်မှာပဲ မာကို(ရုရှားအာနိုး)နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဘယ်လိုများ လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲ သူ့ကိုသစ္စာဖောက်သွားသူကိုရောဖော်ထုတ်နိုင်မလား သက်စွန့်ဆံဖျားထိန်းသိမ်းနေရတဲ့ဟာ့ဒ်ဒရိုက်ဖ်ကရော ဘာကြောင့်များအရေးကြီးနေရတာလဲ ဇာတ်လမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပေမယ့် အက်ရှင်ကားကြိုက်သူတွေ ဗန်ဒိန်း Fanတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့နိုင်ပါတယ် ********တစ်ခုမေတ္တာရပ်ခံချင်တာကတော့ ဒီကားရဲ့ မူရင်းEng subtitle မှာကတည်းက တစ်ကားလုံးနီးပါးလွဲနေတာကြောင့်အသံနားထောင်ပြီးဘာသာပြန်ရတာများနေပါတယ်။ တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံး အနီးစပ်ဆုံးဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မှားယွင်းမှုများရှိခဲ့ပါက ခွင့်လွှတ်သည်းခံကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျ*******
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၇၀အစောပိုင်းက အမေရိကန်နိုင်ငံ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရဲ့ ကော်လိုရာဒိုစပရင်းမြို့ရဲဌာနမှာ ပထမဦးဆုံး တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အာဖရိကန်-အမေရိကန် နီဂရိုးစုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရွန် စတောလ်ဝေါ့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ… အဲ့ခေတ်အခါက လူမည်းတွေနဲ့ တခြားမျိုးနွယ်ဝင်တွေ (ဥပမာ – ဂျူးလူမျိုးများ)ကို ခွဲခြားဆက်ဆံပြီး လူဖြူမျိုးနွယ်တွေသာမြင့်မြတ်သည်ဟု ခံယူထားကြသည့် “Ku Klux Klan” လို့အမည်ရတဲ့ လူဖြူဝါဒကြီးစိုးရေးအဖွဲ့လဲပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်… ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ နီဂရိုးလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ရွန် စတောလ်ဝေါ့အနေနဲ့ သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ ဂျူးအနွယ်ဝင် ဖလစ် ဇင်မာမန်းနဲ့အတူ “KKK” အဖွဲ့ထဲ ဘယ်လို လျှို့ဝှက်အသွင်ပြောင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ အဖွဲ့ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ… ထိုခေတ်အခါက အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ လူဖြူမဟုတ်တဲ့ မျိုးနွယ်ဝင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ နီဂရိုးလူမည်းတွေနဲ့ တခြားအနွယ်ဝင်တွေ ဘယ်လိုဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတာကိုလဲ တွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်…
တစ်လောကမှထွက်ရှိထားတဲ့ဂျပန်live action ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဂျပန်အန်နီမေးရှင်းကိုပြန်ပြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီကားလေးဟာဂျပန်မှာတော့အတော်ရေပန်းစားသွားပါတယ် ငယ်ငယ်လေးကတည်းကမိခင်ဖြစ်သူမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့ကောင်လေးခုယိုစကိထို မတော်တဆမှုကြောင့်သူဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုမြင်တွေ့လာနိုင်ခဲ့တယ် ကောင်းမွန်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုလမ်းမှန်သွားနိုင်အောင်သူသင်ပြပြောပြပေးခဲ့တယ် လောကမှာကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေရှိသလိုမကောင်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးတွေလည်းရှိနေခဲ့တယ် ကောင်းမွန်တဲ့သရဲတစ္ဆေတွေကိုဝိညာဉ်လောကကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်သွားနိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးသူတွေကတော့သေမင်းနတ်ဘုရားတွေပါပဲဝိညာဉ်ဖမ်းသူတွေလို့လည်းအလွယ်ခေါ်နိုင်ပါတယ် သူတို့ဟာမကောင်းတဲ့သရဲတစ္ဆေတွေကိုလည်းနှိမ်နင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိသူတွေပါ သူတို့ဟာနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာပြီးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးးတစ်ကောင်ကိုနှိမ်နင်းဖို့သေမင်းနတ်ဘုရားမလေးကိုလူ့လောကကိုစေလွတ်လိုက်ပါတယ် လူသာမာန်တွေမမြင်နိုင်တဲ့ထိုသေမင်းနတ်ဘုရားမလေးကိုခုယိုစကိကမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးမကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုဘယ်လိုနှိမ်နင်းမလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြပါ ဒီဇတ်ကားကိုအမျိူးမျိူးဝေဖန်ကြပါတယ် မူရင်းကိုမမှီဘူးဆိုတာတွေ မုူရင်းထက်ကောင်းတယ်လို့ပြောသူတွေအမျိူးမျိူးပါပဲကြည့်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်
လောကကြီးမှာ ရှင်သန် ကြီးပျင်းရတာ ခက်ခဲလိုက်တာ ကျွန်မဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ခံရပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ ပုံစံခွက်ထဲမှာနေထိုင်ရတာ မုန်းဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ် …. ကျွန်မအသက်က ၁၅နှစ်ရှိနေပါပြီ ကျွန်မရဲ့မိဘတွေက ကြွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့ လူတန်းစားထဲကပါပဲ…. ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေတာက ကျွန်မရဲ့ အသွေးအသားပြောင်းလဲလာမှုပါ အပျိုဖော်ဝင်ခါစအရွယ် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟော်မုန်းဓာတ်တွေပြောင်းလဲလာတော့ လိုချင်တပ်မက်တဲ့အရာတွေ လဲ ပြောင်းလဲလာတယ်လေ………. အဲ့အချိန်မှာ မိဘတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်နယ်မြေပြောင်းတော့ ကျွန်မလဲ ကျောင်းအသစ်ကိုလိုက်ပြောင်းခဲ့ရတယ် လူအသစ်တွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့က အရမ်းခက်ခဲပါတယ် သူတို့တွေရဲ့ လူရာမသွင်းသလို ဆက်ဆံပုံက ကျွန်မရဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်ကို နှိုးဆွသလိုဖြစ်နေတယ် လောကကြီးကို အရွဲ့တိုက်ချင်စိတ်တွေလည်း ပြည့်နှက်နေပါပြီ အဲ့ဒါတွေအပြင် ကျွန်မရဲ့သဘာဝတရားနဲ့ လူအများရဲ့သဘာဝတရားက အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တယ်လို့လည်း မခံစားရဘူး ကျွန်မရဲ့ခြေထောက်တွေကိုလဲ မုန်းတယ် ကျွန်မရဲ့ခြေထောက်တွေက သူများတွေလိုလဲ မလှပဘူးလေ လှီးထုတ်ပစ်ချင်တဲ့အထိ စိတ်ရူးပေါက်လာတယ် နောက်ဆုံး ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကိုပါ ကိုယ့်မိဘအရင်းမဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားလာရတယ် အဲ့ဒါတွေအတွက် ကျွန်မ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်လဲ ကျွန်မကိုရော ဘယ်သူက ကူညီပေးနိုင်မှာလဲ ဆရာဝန်တွေနဲ့ရော တိုင်ပင်သင့်လား သူတို့ကရော ကူညီပေးနိုင်မှာလား……………… ဒီဇာတ်ကားလေးမှာ ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို မြင်ယောင်မိသွားအောင် ရိုက်ပြထားပါတယ် အများနဲ့တန်းတူဖြစ်နေအောင် အများနဲ့အံဝင်ခွင်ကြဖြစ်အောင် ကြိုးစားရုန်းကန်နေပေမယ့် သူမရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ သဘာဝတရားကို လွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးပြထားတာပါ…….. ဒီဇာတ်ကားရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ နောက်ဆုံးမှ ချပြခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတစ်ခုပါပဲ…. သူမဘာကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာလဲ လူအများထက်ပိုပြီး ဘာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုများနေရတာလဲ ဆိုတာကတော့………… အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦး…. မိဘများအတွက် လမ်းညွှန်ချက် (Parents Guide)……… ယောကျာၤးနှင့်မိန်းမ Sex ကိစ္စ ဆက်ဆံကြသည့် အခန်းများပါဝင်ပါတယ် အသက်မပြည့်သေးသည့်သူများ ကြည့်ရှုရန် မသင့်တော်ပါ ခင်ဗျာ
2018, February 2ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသား Jason Momoa ရိုက်ကူးထားတဲ့ Braven ဇာတ်ကားဟာ ထွက်ရှိပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ လူကြိုက်အရမ်းများပြားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာတော့ မင်းသား Jason Momoaက သစ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့ Joeအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Joe ဟာမှတ်ဉာဏ်မကောင်းတော့တဲ့ သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးရယ်၊ သူဇနီးနဲ့ သမီးလေးတစ်ယောက်တို့နဲ့ အတူတူအေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ သူ့တပည့်တစ်ယောက်ဟာ သစ်တွေကိုတင်ပို့ရင်း မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ မှောင်ခိုတင်ပို့ပါတော့တယ်။ အဲ့လိုမှောင်ခိုပို့ရင်းနဲ့ မမျှော်လင့်ပဲလမ်းခုလတ်မှာ ကားမတော်တဆဖြစ်ပြီး၊ ရဲတွေကားိတော်တဆဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်လာရင် မူးယစ်ဆေးတွေမိသွားမှာစိုးတဲ့အတွက် Joeရဲ့ ပစ္စည်းတွေထားတဲ့ သစ်သားအိမ်လေးထဲမှာ သွားဖွက်ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ Joeတစ်ယောက် ဘာမှမသိလိုက်ရဘဲ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်မိသွားပါတော့တယ်။ နောက့်နေ့ အဲ့ဒီမူးယစ်ဆေးတွေကို လာပြန်ယူတဲ့အခါမှာတော့ အဲ့ဒီ မူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းအဖွဲ့နဲ့ Joeရဲ့မိသားစုတို့ထိပ်တိုက်တိုးပါတော့တယ်။ Joeတစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့မှတ်ဉာဏ်မကောင်းတော့တဲ့ ဖခင်ကြီး၊ ချစ်လှစွာသောဇနီးသည်နဲ့ သမီးငယ်လေးတို့ကို အဲ့ဒီ ဂိုဏ်းသားတွေနဲ့သူ့တို့လက်ကလွတ်အောင်ဘယ်လို ကယ်တင်မလဲ၊ ဘယ်လိုစွန့်စားခန်းတွေနဲ့ကြုံတွေ့မလဲ၊ ဘယ်လိုကြေကွဲစရာအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာရှု့စားရမှာပဲဖစ်ပါတယ်။ Family/Drama/Action ဇာတ်ကားကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့်ဇာတ်ကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
တလောလေးက ရုံတင်သွားတဲ့ ထိုင်း ဒရာမာကားလေးတစ်ကားတင်ပေးထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ဂျိန်းဆိုတဲ့ အလုပ်ကြိုးစားပြီး လှပတဲ့မိန်းမငယ်လေးမှာ ဘာမှမလုပ်တတ် မလုပ်ချင် ဖြစ်သလိုနေတတ်တဲ့ ရှက် ဆိုတဲ့ အစ်ကိုတစ်ယောက် ရှိနေပါတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်ကိစ္စတွေရော ညီမအတွက်ရော ဘာတာဝန်မှမယူတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူဟာ ညီမကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေကို တွေ့လာရင်တော့ လုံးဝတာဝန်ယူပြီး ချိန်းခြောက်လွှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှာ ဂျိန်းနဲ့ကြိုက်မိသွားတဲ့ ထိုင်းဂျပန် ကပြားကောင်လေး မိုဂျီက လပ်ထပ်ခွင့်တောင်းလာချိန်၊ ညီမရယ် အစ်ကိုရယ် ယောက်ဖလောင်းရယ် အလုပ်တစ်ခုထဲမှာ တွေ့ရချိန်မှာ…….
Burning (2018)ဆိုတဲ့ကားလေးကတော့ Rating 7.8ထိ ရရှိထားတဲ့ Drama, Mystery ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ လီဂျောင်ဆူနဲ့ ရှင်းဟဲမီဆိုတဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အမှတ်မထင်ပြန်တွေ့ကြပြီး တယောက်နဲ့တယောက် မသိလိုက်ချိန်မှာပဲ ချစ်သွားခဲ့ကြတယ် အဲ့လိုနဲ့ တရက်ကောင်မလေးက အာဖရိကကို ခရီးသွားရင်း အကိုဘန်ဆိုတဲ့လူနဲ့ သိကျွမ်းလာခဲ့ပြီး အရမ်းရင်းနှီးသွားရင်း ကောင်လေးနဲ့လည်း အသိအကိုဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ် အဲ့လိုနဲ့ အကိုဘန်နဲ့ ကောင်မလေးက ရင်းနှီးလွန်လာပြီး တပူးပူးတတွဲတွဲဖြစ်လာတော့ ကောင်လေးခင်မျာ ပြောလဲမပြောရဲ ခံလဲခံစားရရင်း ကြိတ်ခံနေလာခဲ့တယ် အဲ့လိုနဲ့ အကိုဘန်ဆိုတဲ့လူက ကောင်မလေူတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး သတ်သတ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ရှင်းဟဲမီတယောက်ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပါပြီ ဒါပေမယ့်လည်း မသေချာသေးတာမို့ ကောင်လေးက ကြိတ်ခံစားရင်း လိုက်လဲရှာ စုံစမ်းရင်း သေမတတ်ခံစားပြီး လျှောက်သွားနေခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ရှာတွေ့သွားမှာလား ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲ အကိုဘန်က ကောင်မလေးကို သတ်လိုက်တာလား ကောင်လေးကရော ဘာတွေဆက်လုပ်မှာလဲဆိုတဲ့ ဆန်းကြယ်လှပြီး စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းလေးကို Burning (2018)ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးမှာ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်
ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ Documentary လေးပါ ဇာတ်လမ်းလေးကတေ့ာ filmmaker တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ယောက္ခမအိမ်ကိုအလည်သွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ အိမ်က 1970 ဝန်းကျင်က ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုပါတော့ အဲ့အိမ်မှာ အထူအဆန်းလေးတွေဖြစ်တာကို video လေး ရိုက်ကူးထားတာပါ သူဟာအိမ်ထဲ မှာရှာတွေ့ခဲ့တာကတော့ video box လေးတစ်ခုပါ အဲ့ video flim လေးတွေကို video နေ့မအိပ်ညမအိပ်ပဲ ဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ လူတွေရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှုအတော်များများကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် အကြောင်းကတော့ အချိန်အကြာကြာမျက်တောင်မခက်ပဲ နေကြတာကို ပဲ horror ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းလေးလဲ ဖြစ်တာမို့ ရင်တမမ နဲ့ ကြည့်နေရမှာပါ … ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလဲဖြစ်ပါတယ် Documentary လေးဆိုတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောနေစရာမလိုပါဘူး ဇာတ်လမ်းလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်…
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လကမှ ရုံတင်ခဲ့တဲ့ ဖိလစ်ပိုင်အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်း အသစ်စက်စက်ပါ။ ဇာတ်ကြမ်းလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့ မင်းသမီးကို အသားပေးထားတာမို့ မြင်နေကျ မင်းသားဟီးရိုးလုပ်တဲ့ အက်ရှင်ကားတွေနဲ့တော့ နည်းနည်းကွာမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းကျောရိုးက လက်ရှိဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ နာမည်ကျော် မူးယစ်ဆေးနှိမ်နင်းရေးတိုက်ပွဲကြီးကို အခြေခံထားတယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းမှာ ဖိလစ်ပိုင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှိမ်နင်းရေး အထူးတပ်ဖွဲ့က အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာ ဖမ်းဆီးရခက်တဲ့ နာမည်ကျော် မူးယစ်ရာဇာတစ်ယောက်ရဲ့ စခန်းကို ဝင်စီးပြီး မူးယစ်ရာဇာကိုပါ ဖမ်းဆီးမယ့် စစ်ဆင်ရေးတစ်ခု အစပြုခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးနာမည်က Buy-Bust… သူလျိုတစ်ယောက်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဝင်စီးဖို့ ထွက်လာတဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဟာ စစ်ဆင်ရေးအစမှာပဲ ထောင်ချောက်ဆင်ခံရပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။ အချိန်ယူပြီးစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားခဲ့ကြတဲ့ သူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြမလဲ၊ ကျွမ်းကျင်ထက်မြတ်တဲ့ မန်နင်းဆိုတဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် အမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်ကရော ဘယ်လိုတွေ ရုန်းကန်ရှင်သန်သွားမလဲ၊ မူးယစ်ရာဇာရဲ့ အာဏာစက်ထဲရောက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေနဲ့ရော ဘယ်လို ပဋိပက္ခဖြစ်ကြမလဲ၊ သူတို့ဘက်က အကျင့်ပျက်ခြစားနေတဲ့ သူလျိုကရော ဘယ်သူဖြစ်မလဲ၊ နောက်ဆုံး ဘယ်သူတွေ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့မလဲ ဆိုတာကို ရင်တထိတ်ထိတ် ကြည့်ရူရမှာပါ။ ဇာတ်ကြမ်းဆိုတဲ့အတိုင်း အပစ်အခတ် အသတ်အဖြတ်တော့ နည်းနည်းတော့ ကြမ်းပါတယ်နော်။ ကြိုသတိပေးထားတာ ? ဇာတ်လမ်းမှာ ဖိလစ်ပိုင်က နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Anne Curtis နဲ့ မင်းသား Branton Vera တို့ အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ကိုရီးယား ဒရာမာဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို ကြည့်ရှူချင်ကြသူတွေအတွက် ဝတုတ်မင်းသားလို့ခေါ်ကြတဲ့ ကိုရီယားမင်းသား Ma Dong-Seok ရဲ့ ၂၀၁၈ ထွက်ကားကောင်းတစ်ကားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်… မာ့ခ် လို့ခေါ်တဲ့ ကိုရီယားလူမျိုး တစ်ယောက်ဟာ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အမေရိကန်လူမျိုးမိသားတစ်စုရဲ့ မွေးစားခြင်းကိုခံရပြီး အမေရိကန် နိုင်ငံမှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်.. သူဟာငယ်စဉ်ကတည်းက လက်မောင်းလှဲအားကစားကို ရူးသွပ်ပြီး ချန်ပီယံတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါ… ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်လာချိန်မှာ အမေရိကန် လက်မောင်းလှဲ အားကစားအသင်းတစ်ခုမှာ ဝင်ရောက်ကစားကာ အောင်ပွဲတွေဆက်တိုက်ယူနေရင်း အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာ သူဟာ ကလပ်တွေ ဘားတွေ ဈေးဆိုင်တွေမှာ လုံခြုံရေးအဖြစ် ကြုံရာ လုပ်ကိုင်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ် တစ်ရက်တော့ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကိုရီးယားမှာ လက်မောင်းလှဲပြိုင်ပွဲကြီးရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို ကိုရီးယားကိုခေါ်ပါတော့တယ်…. မာ့ခ်တစ်ယောက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကိုရီးယားရောက်လာပြီး သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုကို ပြန်လည်ရှာဖွေရင်း ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါမလား….။ အရမ်းကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး အသည်းနုသူတွေအတွက် မျက်ရည်ဝဲစေမယ့်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်လို့ အာမခံပေးပါရစေ။
CM ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးကာတွန်းလေးပါ ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်းကတော့ ချောမောလှပမှုကို အနည်းနဲ့အများ မက်မောကြတာပါပဲ ဒီကားထဲက မင်းသားလေးကတော့ ကျိန်စာကြောင့် အရမ်းကိုချောမောခန့်ညားပြီး မိန်းကလေးတိုင်းက ကြွေရလို့ အချစ်စစ်ဆိုတာကိုတောင် မခံစားနားမလည်နိုင်ဖြစ်နေရတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ကျိန်စာက ချောမောဖို့ တစ်ခုထဲမဟုတ်ဘဲ နောက်ကွယ်မှာ ကံဆိုးမှုတွေရှိနေသေးတော့ ဒီကျိန်စာပြယ်အောင် မင်းသားက ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ သူ့အတွက်အချစ်စစ်ဆိုတာကိုရော ရှာတွေ့နိုင်မှာလားဆိုတာကတော့ ဒီကားလေးထဲမှာကြည့်လိုက်ရအောင်လား…
၂၀၁၈ မတ်လကမှထွက်ရှိထားတဲ့ Cheese in the trap ဆိုတဲ့ movie လေးကတော့ k-drama ပရိသတ်နဲ့စိမ်းလှမယ်မထင်ပါဘူး။ ၂၀၁၆ တုန်းက rating အမြင့်ဆုံးရခဲ့တဲ့ series version ကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ main actor ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ဇာတ်ဆောင်တွေအားလုံးကတော့ စီးရီးထဲကသရုပ်ဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူး။ main actor နဲ့ actress ကတော့ park hae jin (man to man ) နဲ့ oh yeon seo (ဆမ်ဂျန်း)တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုန်းဆိုးဆိုတဲ့ သာမန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးက အချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေ ကျူရှင်သင်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ ကျောင်းစရိတ်ရှာပြီး တတ်နေရသူပါ။ နှစ်စပိုင်းတုန်းက သူ့ကိုအေးစက်စက်နဲ့ လျစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ စီနီယာ ယိုဂျောင်း သူ့အပေါ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး နွေးထွေးဂရုစိုက်လာတဲ့အခါမှာ ဟုန်ဆိုးတစ်ယောက် စိတ်ကသိကအောင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြီး အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ သူဌေးသူးလေးယိုဂျောင်း ရဲ့အမူအကျင့်တွေကိုကြည့်ပြီး ယိုဂျောင်းရဲ့နောက်မှာကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ရှိမယ်လို့ ဟုန်းဆိုးထင်ထားခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကအဖြစ်အပျက်အပြီး ဟုန်းဆိုးအပေါ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ယိုဂျောင်းက ဟုန်းဆိုးကိုချစ်ခွင့်ပန်လာခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွင်း ဖြစ်ပျက်နေကြ အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်းနောက်ကွယ်က ယိုဂျောင်းရဲ့လျှို ု့ ဝှက်ထားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကို လှည့်ကွက်လေးတွေနဲ့ကြည့်ရမယ့် romance psycological ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသဲစွဲ ယိုဂျောင်း အဖြစ် (park hae jin ) ဟုန်းဆိုး အဖြစ် (oh yeon seo ) နဲ့ ဒုတိယမင်းသား ဘဲ့အင်ဟိုအဖြစ် (park ki woon ) တို့က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Vampire အကြမ်းစားတွေ၊ Demon Hunter တွေတိုက်ခိုက်တဲ့ Action ဇာတ်ကားသစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တခြား Vampire တွေနဲ့မတူဘဲ တော်တော်ထူးခြားပြီး ရက်စက်တဲ့ Vampire တွေကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အက်ရှင်ကားကြည့်ချင်သူတွေအတွက် ၂၀၁၈ထွက်ဇာတ်ကားသစ်လေးပါပဲ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Cobin Nash ဆိုတဲ့သူဟာ ရဲဝန်ထမ်းအဖြစ် ခက်ခဲတဲ့အမှုတွေကိုလိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်သူ့ဘဝလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ လည်ပတ်နေစဉ်မှာပဲ တစ်နေ့မှာသူဟာ Demon Hunter တွေရဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရပြီး သူတို့မိသားစုရဲ့ ဘဝအမှန်ကိုသိသွားရုံသာမက သူ့မိဘတွေဘယ်လိုသေရတယ်ဆိုတာကိုပါ သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယုတ္တိရှိတာကိုပဲ ယုံကြည်တတ်တဲ့ Cobin တစ်ယောက် ဒါတွေကိုလျစ်လျုရှုပြီး ထူးဆန်းတဲ့အမှုတစ်ခုကိုလိုက်နေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာပြောင်းလဲလာတော့တာပါပဲ။ သူမယုံကြည်ပါဘူးဆိုတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ထိပ်တိုက်တွေ့ခဲ့ရပြီး ပိတ်လှောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Demon Hunter မျိုးဆက်သစ်တစ်ယောက် ဒီလိုပဲအဆုံးသတ်သွားမှာလား။ ဘယ်လိုလက်စားပြန်ချေမလဲ။ Demon Hunter အနေနဲ့ပဲလား ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကံကြမ္မာတစ်ဆစ်ချိုးသွားမလဲဆိုတာကို အကြမ်းပတမ်း တိုက်ခိုက်ဟန်တွေ၊ သွေးထွက်သံယိုရိုက်ချက်တွေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ Sexual နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခန်းတွေ စကားပြောကြမ်းတာတွေ၊ သွေးထွက်သံယိုမြင်ကွင်းတွေများစွာပါဝင်တဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့တော့ မကြည့်ရှုသင့်ပါဘူး။
Death Race 4_ Beyond Anarchy (2018)
Dead Race ဆိုတဲ့ Movie ကို အများကြီးညွှန်းစရာမလိုတော့ပါဘူး… Dead Race ပြိုင်ပွဲမှာထောင်ထဲမှာပြုလုပ်တဲ့ တရားဝင်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ အဲပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေအကုန်လုံးကလည်းထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းကျထားပြီးတဲ့ သေမထူးနေ့မထူး အရက်စက်ဆုံး လူမဆန်ဆုံးနဲ့ လူသတ်သမားတွေ ရာဇဝတ်သားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်…. ဒီလိုအကျဉ်းသားတွေကို သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အခွင့်ရေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်… အဲဒါကတော့ ထောင်ထဲမှာကားပြိုင်ရင်းနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သတ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီလိုပြိုင်ရင်းကနေ ပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့ ဘုရင်တစ်ပါးပေါ်လာပါတယ်… သူကတော့ Frankenstein ပဲဖြစ်ပါတယ်… အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် Dead Race4မှာကတော့ နိုင်ပွဲတွေဆက်လာနေတဲ့ Frank ကို အစိုးရကနေ ထောင်ထဲမှာပဲ ကားပြိုင်ရင် သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖို့အတွက် လုပ်မယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်…… ဒါကြောင့် နိုင်ပွဲတွေဆက်နေတဲ့ ပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့ဘုရင် Frank ကိုရှင်းနိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီ Dead Race ဆိုတဲ့ Movie အမျိုးစားဟာ ထောင်ထဲမှာစရိုက်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ Action Movie အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးသူများနဲ့မိသားစုနဲ့ကြည့်ရှု့ဖို့မသင့်တဲ့ အခန်းအတော်များများပါဝင်ပါတယ်….. လူသတ်ကားဖြစ်ပြီးတော့ သွေးထွက်သံယိုတွေ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်တဲ့အခန်းတွေလည်းအများဆုံးပါဝင်ပါတယ်…. ကြမ်းကြမ်းမှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…
အားလုံးစောင့ျမြှောျနကွေတဲ့ Den of Thieves လာပါပွီ။ ဒုနျးဒုနျးဒကျဒကျ တုံးလုံးပတျလကျ အဆဲတဈလိုငျး ခပျရိုငျးရိုငျးမှ ကွည့ျခငြျသူတှအေတှကျ ၂၀၁၈ ရုံတငျကားကောငျးတဈကားကို တငျဆကျပေးလိုကျပါပွီ။ ဇာတျလမျးအကဉြျးကိုပွောရမယျဆိုရငျတော့ လကျရဲဇကျရဲနိုငျတဲ့ နယျထိနျးရဲတပျဖှဲ့နဲ့ ရတေပျစဈသားဟောငျးတဈသိုကျတို့ ပညာပွိုငျကွပုံကို ရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပေါျမှာ ဓားပွလုံးဝအတိုကျမခံရသေးပါဘူးဆိုတဲ့ ဘဏျကို ဒုစရိုကျသမားတှကေ ဘယျလိုဝငျခိုးကွမလဲ၊ နယျထိနျးရဲတှကေ ဘယျလိုတားဆီးမလဲ၊ မွုပျကှကျတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ ကွည့ျရှုခံစားရမှာပါ။ ဇာတျလမျးက အမြားကွီးခြဲ့ပွောလေ၊ မွုပျကှကျတှပေေါျလေ ဖွဈမှာစိုးတဲ့အတှကျ အနညျးငယျပဲ ညှနျးထားတာဖွဈပါတယျ။ မငျးသားကွီးတှကေလဲ အကွမျးပတမျးသမားတှဖွေဈတာကွောင့ျ ကွည့ျရတာ တကယျကိုအားရတဲ့ ကားကောငျးတဈကားဖွဈမှာပါ။ IMDb Rating 7.1 တောငျရရှိထားတဲ့အတှကျ အကျရှငျကားကောငျးတဈကားလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ခေါငျးဆောငျမငျးသားဖွဈသူ Gerard Butler ဟာဆိုရငျ 300, Olympus has Fallen လို ရုပျရှငျတှမှော ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့မငျးသားကောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ အဆဲအဆိုစကားတှေ အမြားကွီးပါတဲ့အတှကျ ဘာသာပွနျတဲ့နရောမှာ ဆဲဆိုတဲ့စကားတှေ ပါတဲ့အကွောငျး ကွိုတငျပွီး မတေ်တာရပျခံလိုကျပါတယျ။
ချင်းဖောင်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားလေးက Crimemaster လို့ခေါ်တဲ့ App တစ်ခုမှာ အဆင့်နှစ်ချိတ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်… Crimemasterဆိုတာက စုံထောက်ဂိမ်းတစ်ခုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့်ထူးခြားတာက တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းဖောင်က အဲ့ဂိမ်းမှာ အဆင့်နှစ်ဆိုတော့ နယ်နယ်ရရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့… အဆင့်တစ်ကတာ့ “Q” ဆိုတဲ့လူဖြစ်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။ ဦးလေးဖြစ်သူရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကိုတက်ဖို့ အမေရိက ကို ချင်းဖောင်တစ်ယောက်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ တကယ်တော့ဦးလေးဖြစ်သူက ချင်းဖောင်ကို ညာခေါ်လိုက်တာပါ။ တရုတ်တန်းက ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ မြေးဖြစ်သူအသတ်ခံရမှုကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရင် ဒေါ်လာငါးသန်း ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ချင်းဖောင်ကို လိမ်ပြီးခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့အမှုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့တခြားလူတွေကလဲ Crimemaster app ထဲက ချင်းဖောင်ရဲ့ ပြိုင်ဖက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ ချင်းဖောင်တို့တူဝရီးနှစ်ယောက် အမှုကို ဖော်ထုတ်ပုံတွေ၊ အမှုက ထင်ထားသလိုမရိုးရှင်းပဲ ကွင်းဆက်လူသတ်သမားဖြစ်နေတာကြောင့် လှည့်ကွက်များစွာရှိနေပုံတွေကို ဟာသဆန်ဆန်နဲ့ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဟာသဆန်ဆန်ဆိုပေမယ့် အမှုအကြောင်း သဲလွန်စရှာပုံတွေ၊ ကောက်ချက်ချပုံတွေကလဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် စုံထောက်ကားကြိုက်သူတွေ ဟာသကောင်းကြိုက်သူတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ တရုတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ကြောင်း လက်တို့လိုက်ရပါတယ်။ ဂိမ်မာတွေဆိုတာ ဘာညာအထှာတော့ရှိတယ်ဗျ…. တစ်ချို့သော ပုတ်ခတ်သူတွေအတွက် တစ်ချို့သော ဂိမ်မာသမားများက ဂိမ်ကစားရင်း လက်တွေ့ဘဝမှာ ဒီလိုဟိုလို ဉာဏ်သုံးဖြေရှင်းပြီး လုပ်ငန်းအောင် မြင်အောင် သက်သေပြတဲ့ကားလေးဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့ဗျာ…ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Hein Min Tun ဖြစ်ပါတယ်….
အချစ်နဲ့ ရင်းခဲ့တဲ့ တူနှစ်ကိုယ်ဘဝလေး။မမျှော်လင့်တဲ့ ကံဆိုးခြင်းတွေ မလာခင်ထိတော့ အေးချမ်းတာပေါ့။ လှိုင်းတွေ လာတဲ့အချိန်ကမ်းပေါ်က သဲအိမ်တွေ ပြိုပျက်ပေးရမှာ သဘာဝပါပဲ။ ” မင်းအတွက် တစ်နေ့ကျရင် အိမ်ကြီး ထည်ထည်ဝါဝါဆောက်ပေးမယ် ” “အိမ်ကြီး မလိုပါဘူး ငယ်ငယ်လေးကတည်းကနေခဲ့ဖူးပြီးပြီ၊ အိမ်တစ်ဆောင်.. ငါတို့နှစ်ယောက်အတွက်ပဲထမင်းချက်ရမယ့် အိမ်တစ်ဆောင်ပဲ လိုချင်တာပါ ” ______________________________ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ———————– Dhadak ဆိုတဲ့ ကားလေးကအဆင့်အတန်း မတူတဲ့ ဘဝနှစ်ခုကြားကအချစ်စစ်ကို ဖော်ကျုးထားတဲ့ ကားကောင်းလေးပါ။ မမျှော်လင့်ဘဲ သေနတ်ဆွဲမိခဲ့တဲ့ မိမိ၊ ဘဝအတွက် အဆင်သင့် မဖြစ်သေးတဲ့ မိမိချစ်သူ၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အာဏာရလာတဲ့ ဖခင်၊ အားလုံးက ကံစီမံရာအတိုင်း ယိမ်းကရပေမဲ့အသိမကြွယ်သေးတဲ့ လူငယ်အိမ်ထောင်သည်ဘဝမှာရှောင်ပြေးကြရင်း၊ ဘဝကို ရုန်းကန်ကြရင်းနဲ့စကားများရန်ဖြစ်ကြာတာလည်းယနေ့ခေတ်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ မြင်ကွင်း၊သတိထားစရာ ပညာယူစရာတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဘဝမှာတော့ မမျှော်လင့်ဘဲ…. ——————- ဒရာမာပရိသတ်တွေ ကြွေတဲ့ Beyond the clouds ရဲ့မင်းသားချောက အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးမင်းသမီးချောလေး(အိန္ဒိယအေးသောင်း)နဲ့အတူ ဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုမယ့်သူတွေရော… အိမ်ထောင်ပြုပြီးစ ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံတွေပါအတုယူသင့်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါကြောင်း… ယနေ့ခေတ် ရုပ်ရှင်အများစုမှာ ထည့်သွင်းနေကျဇာတ်သိမ်းနှစ်မျိုး ထည့်သွင်းပေးထားလို့အပျော်နဲ့ ဇာတ်သိမ်းနိုင်သလို.. အလွမ်းအဆွေးအငိုနဲ့လည်း ဇာတ်သိမ်းနိုင်မှာပါ။
Digimon Adventure Tri Chapter6Future (2018)
Digimon Series တွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့လူတွေအတွက် အခုတင်ဆက်ပေးမယ့် ကားကတော့ Rating 7.5 ရရှိထားပြီးတော့ ၂၀၁၈ ကထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်… ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျက်ကိန်းနဲ့ဆိုက်လာရပါပြီ… ဘယ်လိုပျက်ကိန်းနဲ့ဆိုက်လာရတယ်ဆိုရင် လူသားတွေရဲ့ကမ္ဘာကြီးနဲ့ Digimon တွေနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး ပေါင်းစပ်ဖို့ဖြစ်လာတာပါ…. အဲလိုဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်လေးတွေက ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုတားဆီးဖို့အတွက် သူတို့ရဲ့ ချစ်စရာ Digimon လေးတွေနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်… ဒီ Movie လေးဟာ Digimon Series တွေကြည့်နေကျလူတွေအတွက် စိမ်းမှာမဟုတ်သလို အခုမှစကြည့်မယ့်လူတွေအတွက်လည်း ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် Animation ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်…
CMပရိတ်သတ်တွေထဲက Thriller ကားတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် 2018 ထွက်ထားတဲ့ DownRange ဆိုတဲ့ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဟေဠိတွေနဲ့ ကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပြီး အစကနေ ပြီးခါနီးထိ ဘာမှ နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူး အဆုံးသတ် ဇာတ်ပေါင်းခန်းရောက်မှသာ ကွင်းခနဲ ကွက်ခနဲ အော်ဒါကြောင့်ကိုးဆိုပြီး သဘောပေါက်သွားစေမဲံ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးရဲ့ပုံစံက လူတွေကို အမဲလိုက်သလို လိုက်ရတယ် တပ်ထွက် sniper တစ်ယောက်နဲ့ ခရီးသွားရင်းကံဆိုးမိုးမှောင်ကျပြီး ဒီစစ်သားနဲ့မှတိုးမိတဲ့ ခရီးသွား လူငယ်တစ်ခုတို့ အကြောင်းကို ပြထားတာဖြစ်ပြီးတော့ လမ်းတစ်ဝက်မှာ သောင်တင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုရဲ့ လွှတ်ရာလွှတ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေရှာရင်း အဲ့သူငယ်ချင်းတစ်စုက လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား စနိုင်ပါသမားကကောဘာလို့ လိုက်ပစ်နေတာလဲဆိုတာတွေကိုကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်ကြီးက ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတာတော့ ရုပ်ရှင်လေးကို သည်းထိတ်ရင်ဖိုကြည့်လိုက်ကြနော်
အခုတစ်ခါတော့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထွက်ထားတဲ့ Early Man ဆိုတဲ့ ကျောက်ခေတ်ကာလကို နောက်ခံထားပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Animation ကားလေးတစ်ကားကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးကို ဒါရိုက်တာ Nick Park ကရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး Aardman Animation က နေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီထားတာဖြစ်ပါတယ် ဒီကားလေးက ကျောက်ခေတ်ကာလကနေကြေးခေတ်ပြောင်းတဲ့ကာလမှာ ကျောက်ခေတ်မှာ အေးဆေးနေခြင်တဲ့ ကျောက်ခေတ်လူသားလေး Dug က သူ့အိမ်ကို အနှောက်အယှက်ပေးဖျက်ဆီး မယ့် လူဆိုးကြီး Nooth ရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်တာကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်ကားလေးကတော်တော် ကောင်းပြီး ဒီကားထဲမှာပါတဲ့ သီချင်းလေးတွေကလဲ တော်တော် ကောင်းပါတယ် ဒီကားလေးထဲမှာ Dug အဖြစ် Eddie Redmayne က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး Goona အဖြစ် Maisie Willians နဲ့ လူဆိုးကြီး Lord Noothဖြစ် Tom Hiddlestom က အသံသရုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ကဲ Animation ပရိတ်သတ်ကြီးအနေနဲ့ကတော့လက်လွတ်မခံသင့်တဲ့ကားလေး ဆိုတာပြောလိုက်ပါရစေ
ဒီ Euphoria ဆိုတဲ့ Adventure, Drama ဇာတ်ကားကို 2017 Toronto International Film Festival မှာပြသခဲ့ပေမယ့် 2018ခုနှစ်မှ Digital Release အဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့တာပါ။ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့သူကတော့ အမျိုးသမီးဒါရိုက်တာ Lisa Langseth ဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်မင်းသမီးနှစ်ဦးက ခေါင်းဆောင်ပြီး ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါသေးတယ်။ ပထမတစ်ယောက်ကတော့ The Danish Girl, Ex Machina နဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ Tomb Raider ကားမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသမီးချော Alicia Vikander ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, Casino Royale, 300: Rise of an Empire တို့နဲ့အတူ ပရိသတ်တော်တော်များများအကြိုက်တွေ့ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီး Eva Green ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ========== Emilie နဲ့ Ines တို့ဟာ ညီအစ်မအရင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် စိတ်ဓာတ်တွေကတော့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သူတွေပါ။ အစ်မဖြစ်သူ Emilie ဟာ စိတ်ခံစားလွယ်သူ ဝမ်းနည်းလွယ်သူဖြစ်ပြီးတော့ ညီမဖြစ်သူ Ines ကတော့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီး အရာရာကိုခပ်ပြတ်ပြတ်ရှိသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ညီအစ်မနှစ်ဦးဟာ ကွဲကွာနေတာကြာပြီဖြစ်ပြီး တစ်ရက်မှာ Emilie က Ines ကို သူနဲ့ခရီးတစ်ခုအတူတူသွားဖို့ ပြောပါတယ်။ ပုံမှန်ဆို အဆက်အသွယ်တောင် မလုပ်တဲ့ Ines ဟာ မကြာသေးခင်ကမှ လုပ်ငန်းအဆင်မပြေဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်လျက်ရှိတာကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ခရီးအတူသွားဖို့ သဘောတူပြီး အစ်မရှိရာကို လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက် အတူစုံပြီး ခရီးကိုစတင်ထွက်ကြပါပြီ။ ဒီခရီးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်သွားမယ် ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို Ines ကတော့ လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူး။ ဒီလို ဘုမသိဘမသိနဲ့ ခေါ်သွားတဲ့နောက်လိုက်လာခဲ့တဲ့ Ines တစ်ယောက် ခရီးဆုံးအရောက်မှာအစ်မဖြစ်သူ Emilie ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ကို သိသွားတဲ့အခါမှာတော့………။ ဒီဇာတ်ကားဟာ IMDb Rating6ရရှိထားပြီးတော့ ဇာတ်ကားတစ်ကားလုံးကို Dialouge အရမ်းဖောဖောသီသီကြီးမသုံးဘဲ အပြနဲ့ပဲပုံဖော်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို သရုပ်ဖော်ထားတာကလည်း တကယ်ပဲကောင်းမွန်ပါတယ်။ သင်ဟာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲဇာတ်ကားတွေကို ငြီးငွေ့နေသူ၊ အေးအေးဆေးဆေးဇာတ်ကားလေးတွေမှကြည့်ချင်တဲ့သူ၊ တွေးစရာပါတဲ့ဇာတ်ကားကိုမှ ကြိုက်နှစ်သက်သူ ဆိုရင်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို လက်လွှတ်မခံသင့်ပါဘူး။
တရုတ်အက်ရှင်ကားအသစ်လေးပါ။ မင်းသားချောလေး Kris Wu လည်းပါဝင်ထားပါတယ်… ဒီကားဟာ Tokyo Raiders (2000) နဲ့ Seoul Raiders (2005) တို့ပြီး ထွက်လာတဲ့ တတိယမြောက်ကားပါ… Fast and Furious ဇာတ်ကားထဲက God’s Eye ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာပေါ်က လူတိုင်းကိုခြေရာခံလို့ရတဲ့ Program လေးကိုမှတ်မိကြမှာပါ။ ဒီထဲမှာကတော့ Hand of God ဆိုတဲ့ Program ကလည်းအဲလိုပါပဲ နောက်ထပ်ထူးခြားတာကတော့ ငွေအပြောင်းအလွှဲတွေကိုပါလုပ်နိုင်တာပါ။ အဲဒါကို CIA အကူအညီနဲ့ မာကျူရီဆိုတဲ့ Hacker တစ်ယောက်ဖန်တီးထားတာပါ။ တစ်နေ့မှာတော့ CIA ကနေ အဲဒီ Hand of God ကိုအခိုးခံလိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ မာကျူရီကိုဖမ်းခဲ့တဲ့ အတော်ဆုံး ကြေးစား အဖမ်းသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လင်ဇိုင်ဖန် ကိုအကူအညီတောင်းပြီး Hand of God ကို ပြန်ရအောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။ လင်ဇိုင်ဖန်ကငြင်းလိုက်ပေမယ့် သူ့နဲ့ပြိုင်ဖက်လည်းဖြစ် တွဲခဲ့ဖူးသူလည်းဖြစ်တဲ့ ဝမ်ချောင်ယင်းက လက်ခံလိုက်တဲ့အတွက် သူတို့နှစ်ယောက် ပူးပေါင်းပြီး Hand of God ကိုရအောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။ Hand of God ကိုခိုးယူသွားသူကတော့ မာကျူရီရဲ့ သမီးလို့ထင်ရပြီး သူက သူ့မောင်လေးလို့ထင်ရတဲ့ Rocky ကို ထောင်ကလွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မာကျူရီနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခင်မင်ခဲ့တဲ့ လင်ဇိုင်ဖန်တစ်ယောက် သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ပြီးဘာတွေဖြစ်ကြလဲဆိုတာ အက်ရှင် များများနဲ့ကြည့်ရမှာပါ။
Rating 7.1 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်… Everybody know ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပဟေဋ္ဌိများနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအလုပ်မအားလပ်တာကြောင့် ရွာငယ်လေးမှာပြုလုပ်တဲ့ ညီမဖြစ်သူရဲ့ လက်ထပ်ပွဲကို လော်ရင်းနဲ့ ခလေးနှစ်ယောက်ဟာ တက်ရောက်ဖို့ ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတဲ့ညမှာတော့ မိဘဆွေမျိုးများ ပာတီပွဲပြုလုပ်ရင်း အားလုံးပျော်ရွှင်ကခုန်နေရင်းနဲ့ မီးပျက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ လော်ရင်းရဲ့သမီးဖြစ်သူ အိုင်ရင်းဟာ ရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူရဲ့ အိပ်ယာပေါ်မှာတော့ ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းအဟောင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အိုင်ရင်းကိုတော့ ဘယ်မှာမှ လိုက်ရှာလို့ မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ မင်္ဂလာပွဲမှာ ရှိနေတဲ့လူစာရင်းကတော့ လော်ရင်းရဲ့မိဘ မောင်နှမ ဆွေမျိုးများ၊ လော်ရင်းရဲ့အိမ်နီးချင်း ရည်စားဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ ပါကိုတို့လင်မယားနဲ့ ပြုပြင်ရေးစင်တာက လူငယ်လေးများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်ရင်းကို ပြန်ပေးဆွဲသွားတာ ဘယ်သူဖြစ်မလဲ၊ ဘာ့ကြောင့်ပြန်ပေးဆွဲသွားရတာလဲ၊ ပြန်ကောတွေ့နိုင်ပါ့မလား၊ ဒီဇာတ်ကားလေးရဲ့ နာမည်နဲ့ကော ဘယ်လိုဆက်စပ်ထားလဲဆိုတာတော့ မြုပ်ကွက်၊ လှည့်ကွက်များစွာနဲ့ ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်ရှုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
Final Score(2018) ကတော့ Action ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ။ အရမ်းကြီးထူးခြားကောင်းမွန်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် အက်ရှင်ပရိသတ်တွေကတော့ ကြိုက်ကြမှာပါ။ IMDB Rating 5.5 သာရရှိထားပေမယ့် Rotten tomato 77% ရရှိထားပါတယ်။ WWE ကစားသမားဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Dave Bautista က အဓိကဇာတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားပြီး နာမည်ကြီး Bond မင်းသား Pierce Brosnan ကလည်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ ညီအစ်ကိုလိုချစ်ခင်ရတဲ့ ရဲဖော်ရဲဖက်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ Michael Knox တစ်ယောက် သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ မိသားစုဆီ သွားလည်ရာကနေ သူ့သူငယ်ချင်း သမီးဖြစ်တဲ့ Danni ကိုဘောလုံးပွဲသွားကြည့်ဖို့ခေါ်သွားပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းမှာ တူမပျောက်ရှာရာကနေ ဘောလုံးကွင်းကိုဖောက်ခွဲဖို့ကြိုးစားတဲ့ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ တွေ့မိသွားပါတယ်။ Konx ရဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ကိုဘယ်လိုအကူအညီတွေယူပီး ဘယ်လိုမျိုးတားဆီးမလည်း ဆိုတာကြည့်လိုက်ကြပါဦးဗျာ။
flavors of youth ဒီတစ်ခါတော့မနေ့တစ်နေ့ကမှထွက်ထားတဲ့ဂျပန်အန်နီမေးရှင်းကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ် ဂျပန်ကားလို့ပြောပေမဲ့ဗားရှင်းကတရုတ်လိုလည်းပါတာဆိုတော့ဖက်စပ်ရိုက်ခဲ့တာလို့ပြောလို့လည်းရပါတယ် yor name ဆိုတဲ့ဂျပန်အန်နီမေးရှင်းကားလေးkimi no na wa ကိုမှတ်မိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် အဲဒီproduction ကပဲဒီကားကိုထပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ ထူးခြားတာကတော့ဒီကားလေးဟာတစ်ကားတည်းမဟုတ်ပဲအပိုင်းလေးတွေခွဲထားတာကိုမြင်တွေ့ရမှပါ အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းဆီမှာအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖန်တီးချက်တွေဇတ်လမ်းဇတ်ကွက်တွေပါမြင်တွေ့ရမှာပါ အဲအပိုင်းလေးတွေထဲကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းလေးကိုအညွန်းအဖြစ်ပြန်လည်ဖော်ပြပါ့မယ် မြို့လေးတစ်မြို့မှာသူငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိပါတယ်ရှောင်ယုရယ်လီမိုရယ်ပန်ရယ်ဆိုတဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း၃ယောက်ပေါ့ကလေးဘဝငယ်ငယ်လေးကတည်းကသူငယ်ချင်းတွေပေါ့သူတို့၃ယောက်ထဲမှာရှောင်ယုနဲ့လီမိုကတော့ပိုပြီးသံယောဇင်ကြီးကြပါတယ်ရှောင်ယုဆိုတဲ့ကောင်မလေးအဖေကသားသမီးအတွက်ဆိုရင်အလွန်လောဘကြီးတဲ့သူပေါ့သမီးဖြစ်သူကိုအကောင်းဆုံးကျောင်းကနေအလယ်တန်းထိသင်ယူပြီးအကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ကိုတက်စေချင်တယ်ရှောင်ယုလေးကလည်းပညာရေးမှာထူးချွန်တယ်လေလီမိုကတော့ကလေးဆန်တယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာမှမစဉ်းစားပဲလုပ်တတ်တယ် ဒါပေမဲ့ရှောင်ယုအပေါ်မှာလီမိုရဲ့သံယောဇင်တွေကတော့အနှိုင်းမဲ့ပါသူတို့သူငယ်ချင်း၂ယောက်မှာထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ် စာသင်ခန်းထဲကရယ်စရာတွေဆရာစာသင်တာတွေစသဖြင့်အားလုံးကိုတိတ်ခွေလေးနဲ့ဖမ်းပြီးနားထောင်တတ်ကြတာပါပဲရှောင်ယုကျောင်းမလာတဲ့နေ့တွေဆိုလီမိုကအသံဖမ်းရှောင်ယုကလည်းအားကျမခံအသံထပ်ဖမ်းတစ်ဦးပေးတဲ့တိတ်ခွေလေးတွေကိုတစ်ဦးကနားထောင်ရင်းသံယောဇင်လေးတွေပိုတွယ်လာပြီးအချစ်အဖြစ်အရောင်းပြောင်းလာကြပါတယ် ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကြားမမြင်ရတဲ့ကံကြမ္မာတွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲသူတို့ရဲ့အချစ်တွေကိုဖွင့်ဟခွင့်ရမှာလားစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ရမှာပါစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ် အချစ်နဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုအောင့်ထားလို့မရပါဘူးတဲ့အားလုံးဒီကားလေးကိုကြည့်နေစဉ်မှာအားမလိုအားမရတွေစိတ်ထဲမရိုးမရွတွေဖြစ်နေမှာကျွန်တော်မြင်ယောင်မိပါတယ် ဒီကားကိုကြည့်ပြီးရင်ကိုယ်ချစ်နေတဲ့သူကိုအချိန်မဆွဲပဲအမြန်ဖွင့်ပြောနိုင်အောင်လုပ်ရင်းFAဘဝကနေကျွပ်လွတ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရင်းဒီကားကိုကျွန်တော်ရယ်ညီလေးkiraရယ်အတူတူဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်းထပ်ကြည့်မှာမို့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်သင်စိတ်ကျေနပ်သွားမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်
GARO Fang of God (2018)
GARO: Fang of God (2018) ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ ဂျပန် actionဇာတ်ကားတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ fanတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာမိစ္ဆာတွေက လူတွေနဲ့ရောနှောနေထိုင်ပြီးလူတွေကို သတ်ဖြတ်စားသောက်နေကြတယ်။မိစ္ဆာတွေရန်ကနေပြီးလူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာကတော့ မီကာအိ သူရဲကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မီကာအိ သူရဲကောင်းတွေထဲမှာဂါဘိုမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့
စုဂါရီဟာ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပေါ့။အဲဒီလိုနဲ့ မကာအိအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နန်ဘီဟာ သူ့ရဲ့သေဆုံးသွားတဲ့ချစ်သူ ဂျူဒိုကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့အတွက်မိစ္ဆာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး အဖွဲ့ကိုသစ္စာဖောက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်နေခဲ့တယါ။
ဂျူဒိုကရော တစ်ကယ်ပဲပြန်ရှင်လာမှာလားမိစ္ဆာတွေကရော နန်ဘီနဲ့ ဘာအတွက်ကြောင့်ပူးပေါင်းတာလဲစုဂါရီ တာကဲ အူဂါရီ နဲ့ရိုင်ရယ်တို့ သူရဲကောင်း လေးယောက်ကရောသူတို့ကို တားဆီးနှိမ်နင်းမှာလဲ ဆိုတာကိုကြည့်ရှုရမဲ့ action ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။IMDB rating လည်းမဆိုး လှတဲ့ ရရှိထားတဲ့မှော်ဆန်ဆန် action ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီတစ်ခါမှာတော့ CM ပရိတ်သတ်တွေအတွက် Gatao 2: Rise of the king ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။IMDb rating 6.1 ရထားတဲ့ ဒီကားဟာ Crime အမျိုးအစားဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ မြောက်ပိုင်းခံတပ်လူမိုက်ဂိုဏ်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတဲ့ ရန်တစ်ယောက်
အရင်က ညီအစ်ကိုလို ချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ ဂျီရန်ရဲ့ ရာထူးလိုချင်မှုနဲ့အတူ ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေကို တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ညီအစ်ကိုချင်း သစ္စာစောင့်သိမှုရဲ့ တန်ဖိုးဟာ ဘာလဲ..?ပဋိပက္ခတစ်ခုရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ခင်မင်ရင်နှီးမှုရဲ့ အကြွင်းအကျန်က ဘာများဖြစ်မလဲ..?ဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာပဲ ဆက်လက်ရှုစားကြပါခင်ဗျာ
အိန္ဒိယကားကောင်းကောင်းလေးတွေ တောင်းတနေတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်အလန်းစား တောင်ပိုင်းကားတစ်ကား တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်Hello (2017), Hello Guru Prema Kosame (2018) တို့လို Drama, Romance ကားကောင်းတစ်ကားဆိုလည်း မမှားပါဘူးမင်းသားကလည်း လောလောလတ်လတ် CM ကတင်ပေးထားတဲ့ Taxiwaala ထဲကမင်းသားချော Vijay Deverakona ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဖူးနေကျ တောင်ပိုင်းကားတွေလိုမဟုတ်ဘဲ အိုဗာအက်တင်တွေ လုံးဝကင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက မိခင်ဆုံးပါးသွားလို့ အဖေတစ်ယောက်တည်းရဲ့ အုပ်ထိန်းမှုဖြင့်ကြီးပင်းခဲ့တဲ့ ဗီဂျေး အသက်ရွယ် ၂၅ နှစ်အရွယ်လူပျိုတစ်ယောက်
မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သတ်ရင် ဘာအတွေ့အကြုံမှမရှိဘဲ ရည်းစားရဖို့နေနေသာသာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတောင် မပိုးမပမ်းတတ်သူတခြားသူတွေနဲ့မတူဘဲ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သတ်လို့ဇနီးမယားဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သတ်လို့ စိတ်ကူးယာဉ်ဆန်လွန်းသူငါသာ ရည်းစားထားရင် ဘယ်မိန်းကလေးမျိုးနဲ့မှအိမ်ထောင်ပြုရင် ဘယ်လိုမိန်းကလေးကိုပဲ အိမ်ထောင်ပြုမှာ စဖြင့်ရှေးဆန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေ တပြုံတပိုက်နဲ့ဘယ်လောက်ထိ မိန်းကလေးတွေနဲ့ပတ်
သတ်ပြီး အတွေ့ကြုံနည်းလဲဆိုရင် စိတ်ဝင်စားလို့ ၆ လလောက်ပတ်လိုက်ခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးက အိမ်ထောင်သည်ဖြစ်နေမှန်း မသိရှာဘူး အဲ့လောက်ထိအဲ့ဒိလို ဗီဂျေးတစ်ယောက် တနေ့မှာ အင်မတန်ချစ်ရမယ့် ဂီသားဆုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆုံစည်းခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေနဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ဂီသားနဲ့ ဗီဂျေး ပေါင်းစည်းခွင့်ရမလားဆိုတာကိုတော့ …..(အမှန်အကန် Comedy, Drama ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ ပေးရတဲ့အချိန်ရုပ်ရှင် ဒေါင်းရကြိုးနပ်စေရမယ်လို့ ရဲရဲကြီး အာမခံပါတယ်)
DatShin Review: Venom (2018)
PlotEddie Brock ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဟာ လူတွေကို တရားမဝင်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကို ဝင်ထောက်လှမ်းရင်း ပြင်ပကမ္ဘာသက်ရှိ
တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Venom နဲ့ ထိတွေ့ ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲအချိန်မှာပဲ ကုမ္ပဏီကြီးကသူ့အမြင် သူ့ရည်မှန်းချက်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဒုက္ခရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာတဲ့အခါမှာတော့ Eddie ဟာသူ့အပေါ်မှာ ကပ်မှီပြီး နေနေတဲ့ Venom နဲ့ အတူ ပူးါပေါင်းတားဆီးဖို့ ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။ Review
Venom ရုပ်ရှင်ဟာ လတ်တလော controversial အဖြစ်ဆုံး ကားလို့ ပြောရမှာပါ။Critic အများစု မကြိုက်သလောက် Fan အများစု ကြိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ Venom character နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီး မသိပါဘူး။Spider-Man video game တွေထဲမှာလောက်ပဲ တွေ့ဖူးတာ များတယ်။ဆိုတော့ ကျွန်တော့ အမြင်က နည်းနည်းကွဲရင် ကွဲနိုင်သပ။အရင်ဆုံး မကောင်းဘူး ထင်တာတွေ ပြောပါမယ်။မင်းသား Tom Hardy က Eddie အနေနဲ့ တော်တော်
လေးမိုက်ပေမဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ Tom Hardy ပိုဆန်နေတယ်လို့ထင်တယ်။သူ့ ပုံမှန် acting စတိုင်နဲ့ တွေ့ရတာ များတယ်။ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း Venom နဲ့ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တော်တော်မိုက်တယ်။နောက် ဇာတ်လမ်းနဲ့ဇာတ်ညွှန်းမှာ တစ်ခါတစ်လေ သိပ်အားမရဖြစ်ပါဘူး။တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက နည်းနည်းလေး ရှည်နေသလို သိပ်ပြီး မလိုအပ်သလို ခံစားရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Visual ပိုင်း။Venom နဲ့ Riot တို့ ဗြင်းကြတဲ့အခန်းတွေမှာ တော်တော်လေး
ကြည့်ရအဆင်မပြေဘူး။ညဘက်ကြီး မည်းမည်းအကောင် ၂ ကောင် ချတာကို 3D နဲ့အနီးကပ်မြင်ရတော့ ကြုံးတော့ ကြုံးနေတာပဲ ဒါပေမဲ့ဘာမှန်းညာမှန်း သိပ်မသဲကွဲဘူး။Venom Character ကြီးက ပုံဖော်ထားတာ မိုက်တော့ မိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုမျိုးပဲ။ (Spidey logo, maybe??) သဘောကျမိတာတွေဆိုရင်တော့ Venom ဟာ MCU ကားတွေလိုမဟုတ်ဘူး။Dark, brutal ဖြစ်တယ်။ PG-13 နဲ့ သွားတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း Tom Holland ရဲ့Spider-
Man နဲ့ တွဲမတွဲ မပြောတတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော့ စိတ်ထဲကတော့သွားမတွဲဘဲ သက်သက် ခွဲထွက်တာမျိုး ပိုလိုချင်မိတယ်။Venom နဲ့ Eddie တို့နှစ်ယောက်ကြားက ချိတ်ဆက်မှု နဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မှီတီနေမှုကို ပြသွားတာလည်း တော်တော်လေးကောင်းတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက် ရယ်နေရတာများတော့ သိပ်ကြီးအဆင်မပြေပေမဲ့ still awesome ပဲ။ Visual တွေဆိုလည်းအများစု ကောင်းတယ်။ရဲတွေနဲ့ ဗြင်းတဲ့အခန်းဆို တော်တော်လေး အားရဖို့ကောင်းတယ်။
Venom ရဲ့ strength ကို တော်တော်လေးမြင်ရတယ်။Venom နဲ့ Eddie နေရာက Tom Hardy ကလည်း အစပိုင်းလေး နည်းနည်းအဆင်မပြေသလိုဖြစ်သလောက် နောက်ပိုင်းတွေမှာ တကယ့် perfect cast ပဲ။Venom ဟာ တကယ့် perfect ဖြစ်တဲ့ ကားတစ်ကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ဆိုးဝါးနေတဲ့အထဲ ပါတဲ့ကားတစ်ကားလည်း မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ တစ်ကားလုံးနီးပါး enjoy ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကားတစ်ကားပါ။
Golden Slumber ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့2018 မှာထွက်ရှိတာတဲ့ Thriller/Action ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Rating တွေအနေနဲ့ကတော့ IMDb 5.8/10 Rotten tomatoes 71% ရရှိထားပြီး castတွေအနေနဲ့ Gang Dong Won နဲ့ Han Hyo Joo တို့အဓိကပါဝင်ထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလောကအကြောင်းတွေ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေအကြောင်း ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး စွပ်စွဲခံရတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ မိမိရဲ့ ရိုးသားမှုကိုသက်သေပြဖို့ကြိုးစားပုံကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကလွဲရင် ဘယ်သူ့ကိုမှယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒီကားလေးကပြောပြပေးသွားမှာပါ။ ကင်ဂွမ်ဝူးဟာ သာမန်ပစ္စည်းပို့သမားလေးဖြစ်ပြီး ရိုးသားကြိုးစားပြီး သူတစ်ပါးကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှကူညီတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်နာတတ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အလွန်သံယောဇဉ်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်မလေးတစ်ယောက်ကို အကြမ်းဖက်မှုမှကယ်တင်ခဲ့ချိန်မှစလို့ သူဟာ စံပြနိုင်ငံသားဆုကို ရပြီးလူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်နေမှန်း သူ့ကိုယ်သူမသိခဲ့ရှာပါဘူး။ တစ်နေ့ သမ္မတလောင်းကိုယ်စားလှယ် အသတ်ခံရမှုမှာ မတရားစွပ်စွဲခံရကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ ရိုးအတဲ့ ကင်ဂွမ်ဝူး တစ်ယောက် သူ့ရိုးသားမှုကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်နိုင်မလား၊ နောက်ဆုံးမှာ အာဏာရှိသူကပဲ အနိုင်ရသွားမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။